ADARAA SABAA – DHABADHAA OF ILAALA!!!:-HUNDEE DHUGAASAATIIN – Beekan Guluma Erena
ADARAA SABAA – DHABADHAA OF ILAALA!!!:-HUNDEE DHUGAASAATIIN	Beekan Erena
Politics Category October 20, 2016Oromo Revolution
74SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
ADARAA SABAA – DHABADHAA OF ILAALA!!!- Hunde Dhugassa
Akkan adaraa seeraa hin jenne seeraa ittin wal bulchinus ta’e biyya keessatti wal bulchinu hin qabnu, kanaafu ADARAA SABAA dabadhaa jechuun filadhe. Giddu kana namootni sababii “eenyu abban qabsoo” jedhuun garee qabattaanii duula wal irratti oofaa jirtu. Duulli wal balessuu kun diyaasporaa Oromoof haaraa miti. Yoo xinnaate marsaa jahaaf(6) waggottan 18n darban keessatti gaggefamaniiru. Akkuma hundi keessan argitan midhaa gurgudda gesisani darbaniiru. Tarii hanga har’atti akka garbumma wayyanee jala turru waan nu godhe keessa sababii hangafa ta’uu dandaha. Gaga’amni duula moraa Oromoo geessatti gaggefameen dhaqabe, WBOn diinaaf saaxilamuu irra kaasee qabsaa’otni baay’ee qabsoo lagatanii akka dhugaan saba keenya qancartu godheeera.
Egaan amma gandaa fi amantiidhaan walitti ta’uun kun salphina keenya nurratti dheeresurra darbee eessanu nu hin gahu. Kun garuu yeroo itti qoosnu fi mana teenye itti wal arrabsinu miti. Daqiiqaan wanta kana katabaa jirutti Oromoo kumatamaan ‘torture’ ta’aa jira. Inni kaan lubbu isaa dhabaa jira. Kaan beelaa fi hiyyumadhaa dhumataa jira. Baay’een keessan beela’uu fi rakkachu, torture ta’uun maal akka ta’ee iyyu hin beektan. Qabsoon kun nama tokko ykn Dhaaba Siyaasa tokko waaqessuuf ykn aangomsuuf hin jalqabamne. Kaayyoon isaa saba keenya garbumma jalaa baasuu, manaa fi masii isaa irratti ajajaa taasisuu dha. Har’a osoo gidiratti jirru, nama tokkof jenne ykn dhaaba tokkof jenne yoo Oromummaa xuresina ta’e, gaafa biyya taane akkam wal godhuuf deemna yaa jaraa? Haa jabaatus haa laafus; miseensa itti taanes dhiifannes, Dhaabilee Oromoo hunda kabajuun dirqama keenya dha. Qabsaa’ota keenyas (yaada isanii wali galles, dhiifannes) kabajuun barbaachisaa dha. Otoo isaan hin jiran ta’ee afaan ittin wal arabsinuu fi dhimmi itti wal arabsinu iyyu waan bira ta’uu mala. Wanti nuti asii ittin wal xiqqesinu kana immo diinni waraabde ittin saba keenya hamilee cabsaa jirti.
Qabsoon kun namuu kan dirqama adda adda fudhatee kaayyoo tokkof itti boba’uu ta’uu qaba. Tokko isa kaan caalaa barbachisumma isaa agarsifachuuf wanta inni godhu jiraachu hin qabu. Mee qaama nama tokko fudhadhaa. Ija, gurra, funyaan, onne, miila fi kkf hundi nama tokko lubbun jirachisuuf uumaman. Hojiin warra kaani mul’ata dha, inni kaan dhokataa dha. Funyaani fi gurri fulduratti waan mul’ataniif, anatu irra barbaachisa warri kaan gatii hin qabdan otoo jedhan; onnen keessa dhahachu dhaabdi. Dhuma dubbiiti. Diyaasporaan hundi hirmannaa fi gaheen keenya harka lamaffaa tahuu irra deebine haa hubannu. Uummata keenya osoo lubbu isaanii hin sasatiin dhugaa sabaaf jedhanii of wareegan ilaalati of-ittummaa fi of-tullummaa keessan nurra dhaaba. Oromoo keessa ani waan hundan beeka, ani gorsi na hin barbaachisu kan jedhu yoo jiraate, inni dhibee gudda ta’uuf deema. Namni hundi dhabatee of haa ilaalu. Aarsaa fi dadhabbii saba keenya boolatti naquu hin qabnu.
Icitii fi qindoominni qabsoo keessatti barbaachisaa dha. Haa ta’u malee, namootni qabsoo kana gaggeessan maqaa icitii hojiitin iftoomina fi itti gaafatamumma sabaa jalaa of golguu hin qaban. Qabsoo hunda galessaa fi hunda hirmaachise gochuu irratti hojiin baay’ee akka hafuu ifa galaadha. Midiyaleen Oromoo jiran hanga qabeenya uummataa jedhanii of labsanitti: OMN, Gadaa, Oromo TV, Simbirttuu fi kkf Oromoo fi qabsaa’ota ishee loogii tokko malee wal qixxumadhaan tajaajilutu irra eegama. Ilaalcha siyaasa tokko ykn qabeenya namoota muraasa ta’uu hin qaban. Hanga yaada diina hin taanetti Oromoon bakka inni itti wal dhagahu tahuu qaba. Ammumaan wal ukkamsuu fi wal-xiqqeesuun dhabachuu qaba. Oromoon saba bal’aa dha, ilaachi, aadaa fi hubannan isaas akkuma kana bal’ata. Yoo jabannee hojjanne, Ityophiyaa irra dabarre boqonnaa Afriikaa ille ta’uu dandeenya. Haala amma itti jiruun yoo itti fufne garuu, bara gabrumma keenya dheeresina. Saba keenya tuffachiifan. Kanaafu, wal nyaachu dhiifne wal haa gorfannu, walis haa dhageenyu. Waliirratti dhiifne, waliif haa dirmannu.
ADARAA SABAA !!!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa74SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Oromo “Presidents” Mulatu Teshome and Lemma Megersa: TPLF/Tigre Regime’s Subservient Tools and Slaves: Amboo Damboobaa –
GENDER BIAS:No representation, Equal but separate- segregation, the two faces of the struggle: y Gurra Dimae →